Ibsa Miseensota Adda Bilisummaa -
Oromoo Godina Kaaba Ameerikaa
Mootummaan dargii kufe erga wayyaanneen Aangoo qabatee waggaa sadii guutee osoo hin turni ummata miliyoona torbaa ol beelaan qabame jedhame lallabamee ture.naannoon beelli kun dhaqabe Oromiyaa keessa naannoo kanaan dura beelaa hin beene hadha beelayyee jechuun garaarsa maqaa ummata oromoon argamu gara Tigirayii tti fe’ataa turuun waan dirree jiru beekamaadha. Ummani beela’e yoo yeroo hunda gargaarsa mootummaa irraa kan eeggatu ta’e bulchuuf hin lafata jedhan waan amanaaniif Habashooni aangoo Impaayera Itoophiyaa qabatani bulcha turanii, wayyaannen si dalaga jirti.
Waan tokko kani habashoota dura irra wayyaanee adda godhu Minilik, H/sillaasee, fi Dargiin qabeenya Oromiyaa keessaa saamaan bakka biraa kan geessanii fi duubee ittiin ijaaramaan hin qaban. Galtuun Habashoota (tigrootin)ammo waan Oromiyaa keessa jiru hunda samuun tigraayyiti galcha turanii amma ammo biyyaa keenna irra maqaa Misoomaa, Masterplani jedhuun Ummata naannoo Finfinnee buqisuuf karoora bafachuun isani Oromoo fi Oromiyaa suuta sutaan dhabamsiisuu waan ta’eef Nuti Miseensoni Adda Bilisummaa Oromoo (ABOn) B/G/ Kamaal Galchuu ttin Hoggannammu dhaaduu dhihoo kana Tigrichi Abayi Tsahayii jedhe wereegamma lubuu , qabeenyaa kenninee dura dhabachuuf waan qara caala mirkaneesinna.
Oromiyaa irratti ba’aan hadha(har’a) jiru dacha dacha ta’aa jira. Tigirotiin Qabeenyaa keenna ufi xuuxaa turtee amma ammo olaa duraan nagayaan wolin jiranuu naannolee hundaa samsisuuf ummata kenna irratti duula maqaa Liyuu Milsha jedhun samsissa jirachuun waan namu beeku. Kanaaf Ummani oromoo haala kana keessa bahuuf qabeenya issa irratti abba ta’uuf abba biyyumma issa mirkanefachuuf sab-­‐biccuu tigiroota ufi irra lolee kasuu malee kadhaan ykn maqaa filmaata kijibatiin akka hin taane Addi bilisummaa Oromoo (ABOn) waan amanee sabaa issa tiif qabsoo irra jiruuf nuti Miseensoni GKA dhaaba keenna cinna dhabanee Qabsoo Hogganummaa B/G/ Kamaal Galchutiin geggeffamtuun irree tokko taanee haala Duguggaa OROMO irratti Abayi Tsahayii Labsse dura dhabanna.
Cunqursaan yeroo adda addaatti dhufani tooftaa fi maqaa gara garaa qabataniis akeekni isaanii mirgaa saba Oromoo ukkaamsanii bituu haga ta’etti dalagaan isanii tokkuma. Qalama adda addaa ofitti dibanii ummatta Oromoo gowwoomsuuf yaalanilee tasa hin milkaa’ani. Wayyaanneen osoo aangoo harkatti hin galfatiin dargii karaa danddtte hundaan balaaleffataa turtte,dhimmi dargii ittiin abaaraa turtte keessa ,Dargiin mirga dimokiraasii hin eegu kkf jechuun olola irratti oofaa turtte.dhuguma dargiin mootummaa cuqursa waan ta’eef mirga dhala namaa hin kabajamu ture.dalagaan dargii raawataa ture mormitoota hin gabbise malee waan huqqise hin qabu.dargiin ummata Oromoo fi Sab-­‐biccuu tigire irraan midhaan gahe hin walaalamuu. Tigiroota beelaan fixuu caalaa wayyaanneen akka qullaatti haftuuf kumoota dhibbaan lakayamu buqqise lafa gara biratti geesuun qubachiise, ummata gabaa dhaqee wal bitee gururatuu boombiin dhahe fixuun waan seena bara dhihoo kanatti. Wayyaanneen haala yeroo sani dargiin irratti raawwataa ture amma ummata oromoo irratti gara jabinaa hiriyyaa hin qabneen raawwataa oromoota hedduu sababa ABO deggartu jedhuun yeroo dheeraa hidhuu, ajjeessu,biyyaa abba issa irra akka baqatu godhu namoota mana hidhaa keessa jiraan dalagaa fashistumaa raawwataa jirachuun waan Adunyaan guutuun beeku waan ta’eef asi irratti barreessun hin barbaachisssu. Sirna Impaayera Itoophiyaa keessa kan Dargii ilmaan oromoo maqaa milishaa jedhamuun lola isa hinilaalleefi hinbeekneen oofanii ficcisiisaa turaan, hadha (har’a)garuu oromoon kan du’aa jiruuf sababa inni of baree Bbilisummaa barbaaduuf ajjeessaa jiru. Kana irra dabree garu oromoon doorsisaa tigree didee Dhaaba Opdo ufiin jettu taan maxxantuu taatee ummata oromoo irratti wayyaannee mootii goote, ajajamuu didee dhaaba isaa ABO muldhaata harayaa (New Vision) akka deeggaraa jiru mamii hin qabu. Haata’u malee ABOn rakkollee keessatiif kan alaa ttin akka ummani baldhaan fedhutti deemee ummata kenna sab-­‐biccuu wayyaannee jala baasu akka hin dandeene dhugaa dhokachu hin qabne. Haala kana irra kan ka’ee ABOn B/G/Kamaal Galchuutiin hoggannammu malaaf dhawwaa haali qabsoo gafatu hundaan qabsoo irra waan jiruuf nutti
Miseenson Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba keenna cinna hirirree wayyaannee hidaan buqqisuuf maqaa Misoomatiin lafa issa irra akka oromoo hin buqqifnee qabsoo keenna halakan guyyaa itti fufina.
(A soft answer turnth wars: but grievous words stir up anger) gabaabatti haali amma Abayi Tsahayi ummata oromoo bakka jiru hundaa waan madaa issa itti kaasse fakkatta kanafuu madaa teena tana yerooma gabaabaa nuajjeessaniif nuarabsaan dubbachuu osoo hin taane akka Ijaaramuun diina kana ufi irra kafnee biyyaa teena keessatti sirna Gadaa debbiffanuuf dalaguun barbachissa dha. The tongue is more to be feared than the sword: akka galtuun tigiroota Abayi Tsahayi jedhetti ummani oromoo waan jecha isattin jilbifatuu itti fakkatte garuu duubbiin faala sani ta’udhaan ummani oromoo akka gaarii woligurmesee Masterplanii issa akka fashalsiissu nuti miseensoni ABO, Godina Kaaba Ameerikaa social media adda addaa irra waan argaa jiruuf daran ummata keenaaf qabsayuu qabna jenne abdii horee jira.
The tongue is like a sharp knife … kills without drawing blood. Akka dhadanoo galtuu Abayi Tsahayi tti, ummata oromoo sodaciisuu akka hin dandeenee qabsoo keenna bakka hundanuu jabbanne itti fufu barbachiissa dha jennee waan
amanuuf jallaan haala adda addaa irra kan ka’ee yeroof cal-­‐jetanii teetaan dhaaba kessaan ABO goota moonaa wayyaannee diigee Ummata isatiif jecha jiru gaarii , maatii isa facaasee qabsoo irra jiru, B/K/ Kamaal Galchutiin Hoggannammu jalatti akka hiriruun Mater plani wayyaannee dura wolin dhabanu nuti Miseensoni ABO GKA isinyadachiffanna.
Qabsoon bilisummaa ummatta oromoo wareegama ulfaata fi qabsaawotni oromoo baasaniin sadarka har’a irra gahe dhaqqabuu danda’eera ,wareegama gootoonii ilamaan oromoo Kaaba kibba, baha dhiha lubuu isaan qaalii itti dhabaan nuti Miseensoni ABO Godina Kaaba Ameerikaa , ‘’qabsaawaa malee qabsoon hin kuftu’’ jecha jedhuun dhaadatta qabsoo ummatta oromootiif godha jiru irra jechi sab-­‐biccuu wayyaannee Tigirayi Abayi Tsahayi nu cimsa malee nu hirfacisu.
Wolumagalatti akkatta mooyxannoo asiin dura argaa ture irra hubannetti
kaayoon dharraasisaa fi maqaan cululuqaan callaan galama akeekkatameen nama hingawu.ka galama xiyyeeffatameen nama gawu yoo kayyoo xaliila irratti
ijaaramani sirnaan, naamusaa fi murannoon hojjatan qofadha. ABOn B/G
/Kamaal Galchu tiin hoggannammu jijjiirraa hundee ummata oromoo keessatti fiduuf waan qabsoo irra jiruuf nuti miseensoni ABO Godina Kaaba Ameerikaa, Murtii fi Ejjannoolee armaan gadii haala Master planii irratti dabarfanna.
1/haali wayyaanneen ummata oromoo irraan gaha tureef kan amma maqaa misoomaatiin qotee bula biyyaa abba issa irra kaaseef amalee kasuuf sagantaa bafatee suuta sutaan ummata oromootif oromiyaa dabamsisuuf deemu hanga wareegama lubuu itti kafaluun dura dhabanna.
2/ilmaan oromoo biyyaaf ala keessatti wayyaannee wolin ummatta keenna qe’ee isa irra buqisaa lafa bitachuun hirmataan akka itti gafatama seena jala hin bane beeka, gocha akana irra akka ufi qusataan hubachifnna.
Dhabbolleen oromoo kan wayyeennee hidaan buqqissu qabna jetani amataan
gara garumma xixiqqo siyaasaa dhiftanii akka diina woligala ummata oromoo TPLF sirna issa diiguu irratti fulleffatan nuti miseensoni ABO GKA wamicha lamumma isin goona
4/ sab-­‐bontooni dhaaba Maxxantuu TPLF –OPDO keessatti falmii godha jirtaan ummatta keessan cinna dhabachuun wayyaannee irratti meeshaa woranaa fulleffataan itti gafatamaa seena jala akka bataan irra deddebi’aa wamicha isin goona.
5/jallaan asiin dura qabsoo bilisumma keessatti qooda heddu fudhataa turtaan sababaa adda addaa tin duuba ta’aa jirtaan akka qabsoo tessanitti debbitanii wolin qabsoo teena itti fuuffnuu nuti miseenson ABO B/G/Kammal Galchuuttin hoganamnuu, amallee qabsoon isin itti rakkata, hidhama, biyyaa oromiyaa irra bataniif galama hin geene koota wolin qabsayaa ummata keenna biyya abba issa irratti akka abba ta’uu goona jecha fedhi kenna isin dhamna.
6/ hawaasni oromoo adunyaa guutuu jirtaan, darggagoon darggagetiin abootiin
hawotiin, baratan barsiisaan, qotee bulaan polisiin woraani bakka adda addaa keessatti sadarkaa qabdan, wolumagalat ummani oromoo bakka jirtaan hundaa haala Master planii wayyaannee dura akka dhabataan gadifagenaan isinitti dhamanna. Miseensota Adda bilisummaa Oromoo B/G/Kamaal Glachuu tin hogganammu Godina Kaaba Ameerikaa
Injifannoon Ummata Oromof
Tags Abo Jijjiiramaa Kamaal Galchuu
Previous Short Oromo Film- Mr .Master killer
Next VOA: seenaa suukanneessaa jiruu baqattoota Oromoo..